ကောင်းတဲ့အလုပ်! ဤကဲ့သို့သောဝေမျှရန်အလွန်ရက်ရောသည် ...
ဒီ icon တွေကိုမျှဝေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာငါရှာဖွေနေတဲ့ 'တွစ်တာအကွက်' မှပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေတဲ့အရာပဲ။
ဒီ plugin ကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်ပြီး၊ ငါ twitter account မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ငါ့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုမမှတ်မိတော့ဘဲမှန်ကန်တဲ့အရာတစ်ခုထည့်လိုက်တာနဲ့သူကအားရကျေနပ်မှုတစ်ခုလိုအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အိုင်ကွန်ကိုကြိုက်နှစ်သက်! ဘယ်သူသိနိုင်လဲ၊ မင်းက Twitter အိုင်ကွန်အသစ်ကိုသင်ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီသီချင်းကိုမဖွင့်ခင်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်ထဲကိုဒီကိုထည့်သွင်းလို့ရမလားဆိုတာငါကြည့်ရလိမ့်မယ်။
14:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 10, 27
Doug, မင်းဟာအကောင်းဆုံးဆေးလုံးလား။ ဒီရုံပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ပါတယ်။ တွစ်တာကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဝဘ်ဒီဇိုင်းဘလော့ဂ်တွင်ထည့်သွင်းရန်သာစဉ်းစားခဲ့သည်။ ထိုအ BAM, ဒီမှာသူတို့ဖြစ်ကြသည်!
နောက်တစ်ခါသင်၏ Form Form plugin လိုထူးခြားပြီးအသုံးဝင်သော tool တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Joni! မင်းအရမ်းသဘောကောင်းတယ်
wow, ပြီးပြည့်စုံသော! Twitter ပေါ်ကတစ်ခုခုရှာတာကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းတဲ့ twitter အိုင်ကွန်ကိုကျွန်တော်ရှာခဲ့တယ်။ ကောင်းတဲ့အလုပ်, ငါငါအများအပြားက်ဘ်ဆိုက်များရှိသည်အဖြစ်ငါအများအပြားနေရာများတွင်ဒီသုံးပါလိမ့်မယ်။
မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ LiveJournal ပရိုဖိုင်းတွင် twitter အိုင်ကွန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လတ်တလော Blogger မှာ site တစ်ခုကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ငါအေးမြသော Twitter icon ကိုရှာဖွေနေသည်၊ ဤစာမျက်နှာသည်ရလဒ်များ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသေချာတယ်၊ ဒီ site ကသတင်းအချက်အလက်နဲ့အရင်းအမြစ်တွေအများကြီး။
Mark McClure ဖြစ်သည်
twitter ပုံရိပ်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - 50 x 50 သည်ယခုတွင်ပြသနေသည်။
rohan nel ပါ
ကိုယ့်အဖြစ်မှန် twiter အပေါ်ဖြစ်၏။